गाई सम्झेर गोरुमा भोट ! - Naya Patrika
गाई सम्झेर गोरुमा भोट !
लक्ष्मी काफ्ले, झापा | साउन ०२, २०७४
स्थानीय निर्वाचनमा झापाका मतदाताले उम्मेदवार नै नभएको चुनाव चिह्नमा समेत भोट हालेको पाइएको छ । मतदाताले राप्रपाको चुनाव चिह्न गाई सम्झेर गोरुमा भोट हालेपछि उम्मेदवार नै नभएको चिह्नमा समेत मत परेको हो ।
झुक्किएर गोरुमा भोट खसेपछि झापामा राप्रपाले ठूलो क्षति व्यहोरेको छ । उम्मेदवारी नै नपरेको चुनाव चिह्न गोरुमा परेको मत पनि बदर भएको छ । बिर्तामोड नगरपालिकामा मात्रै २ हजार ९० मत गोरुमा परेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जनाएको छ । राप्रपाबाट बिर्तामोड नगरको मेयरमा उम्मेदवार बनेका भक्ति सिटौलाले ६ हजार १ सय ९१ मत पाएका थिए । उनले भने, ‘मेरो अझै भोट आउने रहेछ, मतदाता झुक्किँदा मेरो २ हजार ९० मत खेर गएछ ।’
मतपत्रको बायाँतर्फ चौथो नम्बरमा गोरु चुनाव चिह्न र दायाँतर्फ दोस्रो नम्बरमा गाई चुनाव चिह्न थियो । बायाँतर्फबाट लेख्ने बानी परेका कारण मतदाताले गोरुलाई पनि गाई नै ठानेर भोट दिएको उनको अनुमान छ ।
भद्रपुर नगरपालिकामा ३ हजार ४ सयभन्दा बढी मत गोरु चुनाव चिह्नमा परेको छ । अमतदाता झुक्किँदा धेरै मत काटिएको राप्रपाका मेयरका उम्मेदवार नवराज पनेरू ‘राजु’ले गुनासो गरे । उनले २ हजार ८ सय २२ मत प्राप्त गरेका थिए ।
गोरु तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको चुनाव चिह्न हो । तर, यो पार्टीले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएको थिएन । निर्वाचनमा सहभागी नै नभएको दलको चुनाव चिह्नलाई निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा राखेका कारण ठूलो घाटा भएको राप्रपाका कार्यकर्ताको गुनासो छ ।
यस विषयमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका प्रमुख गोपाल आचार्यले केही गर्न नसक्ने बताए । ‘गाई सम्झेए गोरुमा भोट जाओस् वा गोरु सम्झिएर गाईमा, हामीले यस विषयमा के भन्नु ?’ उनले भने, ‘मतदातालाई जहाँ मत दिन मन लाग्यो त्यहाँ दिए नि !’ गाई सम्झेर गोरुमा कति भोट खस्यो भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको उनले बताए ।